Dibad bax looga soo horjeedo Charlie Hebdo oo Muqdisho lagu qabtay”sawiro” – Radio Muqdisho
Dibad bax looga soo horjeedo Charlie Hebdo oo Muqdisho lagu qabtay”sawiro”
Dibad baxani ayaa waxaa looga soo horjeeday sawir gacameedkii Wareyska Charlie Hebdo uu ku aflagaadeeyay Nabigeena suuban Muxamed Caleyhi Salaatu wasalaam kaas oo maanta lagu qabtay barxadda Masjid Isbaheysiga Islaamka ee magalada Muqdisho.
Iso soo baxan ayaa waxaa ka qeybgalay Culuma’udiin,Waxgarad,Dhallinyaro iyo Haween iyadoo dadkii dibad baxan ka qeyb qaadanayay ay wateen Boorar ay ku xardhanaayeen ereyo ay ku muujinayeen sida ay ugu xun yihiin Aflagaadada loo geystay Nabigeena Muxamed Caleyhi Salaatu Wasalaam.
Sheekh Nuur Sheekh Cusmaan oo kamid ah culuma’udiinka soo qaban qaabiyay dibad baxaasi ayaa waxaa ugu baaqay Umadda Muslimiinta ah ee caalamka ku nool in ay muujiyaan sida ay ugu soo horjeeedan aflagaadada cad ee loo geystay nabigeena Suuban CSW isla markaana wadama ay ku nool yihiin ay ka dhigaan dibaxyo arintaasi looga soo horjeedo.
Sidoo kale waxaa goobta uu ka socoday dibad baxa ka hadlay Sheekh Axmed Gurxan Cabdi iyo Shiiqa Cali Saciid oo kamid ah dadkii ka qeyb galay dibad baxaasi ayaa sheegay in wax laga xumaada ay tahay in dad jaahiliin ah ay aflagaadeeyan Nabigeena Muxamed Caleyhi Salaatu Wasalaam.
Tan iyo markii Jariirad ku yaala dalka Faransiiska oo lagu magacaabo Charlie Hebdo uu soo saaray sawir gacmeed lagu aflagaadeynaayo Nabigeena Suuban Muxamed Caleyhi Salaatu wasalaam ayaa waxaa isa soo taraayay dibad baxyo ay dhigaayaan shacabka Muslimiinta ee ku nool wadamada caalamka.
Allaha u naxariistee Sheekh Cabdi Sheekhaal oo lagu aasay Muqdisho
Midowga Ardayda Jaamacadda SIU oo hogaan cusub doortay “SAWIRRO”